Fomba tsara kokoa - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Fomba tsara kokoa
Vao haingana dia nanontany ahy ny zanako vavy: "Ry Neny, misy fomba iray lehibe tokoa ve amin'ny hoditra hoditra"? Nihomehy aho. Fantany ny dikan'io teny io, kanefa dia tena nametraka fanontaniana tena izy momba ity saka ratsy ity. Matetika mazàna amin'ny fomba iray anaovana zavatra iray. Rehefa mikasika ny asa sarotra izany dia mino ny Amerikanina "mahay fahatsiarovana antitra Amerikanina". Avy eo isika dia manana ny cliché: "Ilaina ny renin'ny famoronana". Raha tsy nahomby ny andrana voalohany dia azonao antoka ny tenanao ary avelao ny hafa.
Rehefa nampianatra momba ny tenany sy ny fomban'Andriamanitra Jesosy dia nomeny fomba fijery vaovao ny zavatra rehetra. Nasehony azy ireo ny lalana tsara kokoa, fomba iray amin'ny fanahin'ny lalàna, fa tsy ny litera (lalàna). Nasehony azy ireo ny làlan'ny fitiavana fa tsy ny fomba fitsarana sy kajy. Nitondra azy ireo (sy isika) tamin'ny fomba tsara kokoa izy ireo.
Tsy nilefitra tamin’ny fomba hahazoana famonjena anefa izy. Maro amin'ireo tantarany momba ny tsy fahatomombanan'ny lalàna no nanondro fa tokana ihany ny lalana tokony haleha amin'ny zavatra sasany. Ny lalana mankany amin'ny famonjena dia ny lalana amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany - ary Jesosy irery ihany. “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana”, hoy izy ao amin’ny Jaona 14,6. Noho izany dia tsy namela fisalasalana izy fa tsy mila mitady olon-kafa ianao (dika: New Life, 2002, manerana).
Hoy i Petera tamin’i Anasy mpisoronabe, Kaiafa, Jaona, Aleksandra ary ny havan’ny mpisoronabe hafa fa tsy misy famonjena afa-tsy amin’ny alalan’i Jesosy. “Any amin’ny lanitra rehetra dia tsy misy anarana hafa hantsoin’ny olona mba hovonjena” (Apostoly. 4,12).
Naverin’i Paoly izany tao amin’ny taratasiny ho an’i Timoty: “Fa iray ihany Andriamanitra, ary iray no Mpanalalana amin’Andriamanitra sy ny olona, ​​dia Kristy Jesosy, izay tonga olombelona.”1. Timoty 2,5). Na izany aza, mbola misy ny sasany mitady safidy hafa sy safidy hafa. "Inona? Tsy afaka milaza amiko ianao fa iray ihany ny lalana. Te-ho malalaka amin’ny fanapahan-kevitro manokana aho!”
Betsaka ny manandrana fivavahana hafa. Ny tondro atsinanana dia tena manokana. Ny sasany dia te hanana traikefa ara-panahy, fa raha tsy misy ny firafitry ny fiangonana. Ny sasany mitodika amin'ny asan'ny maizina. Ary avy eo misy ny kristiana mieritreritra fa tsy maintsy mihoatra ny fanorenan'ny finoana an'i Kristy irery ihany izy ireo. Io no antsoina hoe "Christ plus".
Angamba ho an'ny sasany dia toa mora loatra ny fihetsika tsotra amin'ny finoana nefa tsy manao na inona na inona ho an'ny famonjena. Na mora loatra. Na toa mora loatra ny miala amin’ilay mpangalatra teo amin’ny hazo fijaliana izay nekena ny fitalahoana tsotra tamin’i Jesosy mba hahatsiaro azy. Mety ho voafafa ve ny firaketana heloka bevava momba ny heloka bevava iray izay nitaky ny fanomboana ny asa ratsiny - amin'ny alalan'ny fieken-keloka tsotra fotsiny amin'ny olon-tsy fantatra iray izay mihantona eo amin'ny hazo fijaliana akaiky indrindra? Ampy ho an’i Jesosy ny finoan’ilay mpangalatra. Tsy nisalasala izy nampanantena an’io lehilahy io ny hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa ( Lioka 23:42-43 ).
Asehon'i Jesosy fa tsy mila mitady fomba hafa, safidy na fomba hafa hanadiovana ny saka ohabolana isika. Mila manaiky am-bava fotsiny isika fa Jesosy no Tompontsika ary mino amin’ny fontsika rehetra fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin’ny maty ka hamonjy antsika (Romana 10:9).